Asenze kangcono ukulwa nezinselelo esibhekene nazo futhi sifunde emaphutheni amadala, kuloba uBusi Mavuso - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
KUNINGI osomabhizinisi ababhekene nako: ukubhebhetheka kweCOVID-19 okusha, ukucisha kukagesi okuqhubekayo, impi ephazamisa ukuhwebelana emhlabeni nesimo sezulu esibi esidala umonakalo; njengezikhukhula ezenzeke KwaZulu-Natali.
Kuko konke loku okwenzekayo kumele sigxile ekuqhubekeni nomsebenzi ngawo wonke amandla esinawo, silekelelane futhi selekelele izinhlaka ezithembele kuthina.
Njengoba sengibhale kaningana kule ngosi ukuthi osomabhizinisi badinga ukusebenzela endaweni efanele ukuze bakhe imisebenzi futhi bakhokhe nentela. Umthetho kahulumeni nemisebenzi eyenziwa wuhulumeni inesandla esikhulu kuloku.
Loku kuvamise ukuba yimpumelelo. Isikhwama iSolidarity Fund nezinye izindlela okungenelelwe ngazo ukwelekelela iKZN kuyisibonelo saloku. Nakuba kunjalo kodwa zicace bha izinselelo nokuphoxeka ngokuthi asinawo ugesi owanele okuloku kuqhubekile.
Sesiphinde sazithola sesingaphansi kwesimo senhlekelele ezweni lonke, sesibhekene nesinye isiqubu seCOVID-19. Kepha kuloku lezi zinto azihambisani. Isimo senhlekelele singenxa yokuthunyelwa kwezinsiza ngokushesha eKZN kanti lesi siqubu seCOVID-19 sizolawulwa yimithetho emisha. Izinguquko ngeCOVID-19 sezizolawulwa yimigomo yeNational Health Act, esinezinsuku eziwu-30 ukuthi siqale ukuyisebenzisa kusukela mhla ka-5 ku-Ephreli.
Isiwombe sesihlanu yisona esizoqala sizwe amandla ale migomo. Ngiyethemba ukuthi le mithetho izosebenza kangcono kunalena ebisebenza phambilini, kuhambisane ukunqanda ukubhebhetheka kwegciwane nokuvikela umnotho nempilo yethu. Kukhona ingozi lapha; eziwombeni ezidlule kwasetshenziswa imithetho eminingi ehlukene njengoba sasizama ukulwa ngendlela efanele siyizwe.
Kwaba namaphutha esafunda kuwona. Lesi sifundo kumele sisetshenziswe uma sekusebenza imithetho emisha ukuze kuliwe nobhubhane.
Ukuqina kwabantu nokungatheleleki kwabo kushintshe kakhulu. Ukugoma yindlela ebalulekile ukuvikela abantu futhi kusabalulekile ukuthi sandise isibalo sabantu abagonyiwe. Osomabhizinisi bangabamba iqhaza elibalulekile ekugomeni abantu ngokubaphoqa ukuthi bagome nakuba nomthetho ocacile kukahulumeni ngaloku ungasiza. Ngale kwemigomo, amazinga aphezulu akudala okutheleleka kwabantu andisa ukuvikeleka kwabo.
Ukusabalala kwamasosha omzimba alwa nezifo alinganiselwa ukusuka ku-56% kwabangakaze bagonywe abaneminyaka engaphansi kuka-12 kuya ku-93% kwabagonyiwe abaneminyaka engaphezu kuka-50. Loku kuvikela okusezingeni eliphezulu kuthiwa kungenxa yokungabi namandla kakhulu kwesiwombe se-omicron ekufeni nasekulalisweni kwabantu esibhedlela.
Loku kusho ukuthi singahlawumbisela ukuthi lesi siwombe ngeke sizwele kangako, ngakho singazigwema izindlela ezingalimaza izindlela zokuvuselela umnotho wethu; ovele uxhuga.
Iziwombe zokuqala zasitshengisa ukuthi singakwazi ukulawula lesi sifo kanjalo nomnotho uma kuboniswana ngemiphumela yemithetho eshaywayo. Ngikubheke ngabomvu ukubonisana nohulumeni ukuze sibuke izinto ngeso elibanzi.
Ekulweni neCOVID-19, ukuvuselela iKZN emonakalweni wezikhukhula nemizamo yethu yokuba nogesi owanele sisebenza kahle uma osomabhizinisi nohulumeni bebambisene. Osomabhizinisi bangaqhamuka nezixazululo kwizinselelo ezikhona kodwa sidinga ukuvulelana isifuba futhi sizimisele ukulandelela ngokufanele sikwenze.
Ngizoqhubeka nginxuse uhulumeni ukuthi ulandelele okudingekayo ngakuwona futhi ngigqugquzele nosomabhizinisi ukuthi babambisane kahle uma kusetshenzwa nabo.
Izikhukhula zaseKZN ziwulimazile umnotho wethu zilandela ukuvalwa kwezwe ngenxa yeCOVID-19 kanjalo nodlame lwangoJulayi ngonyaka odlule. Njengoba kulindelwe ukuthi zande izinkinga ezilethwa wukuguquguquka kwesimo sezulu sekuyisikhathi sokuthi izwe lethu linyuse ukutshala izimali ezintweni ezizosenza, simelane nalezi zimo. Ngeke sikwazi ukulawula imvelo kodwa singakwazi ukuzilungiselela kangcono.